Posted by cobra on Jan 28, 2011 in News | 12 comments
အထိ ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ ထုတ်ဝေခွင့်မရသေးဘဲ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်နှင့် လစဉ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်းများကိုသာ စစ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရေးသား ထုတ်ဝေခွင့် ပြုထားသည်။
မတရားလိုက်တာကွာ။ ပြည်သူချစ်တဲ အနုပညာရှင်တွေရဲ ပွဲကို သူတို့က မနာလိုဖြစ်နေသေးတယ်။ သူတို့သမီးချောကြီး မင်္ဂလာ ပွဲတုန်းကပိုတောင်ကြမ်းသေးတယ်။
အားကျတယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကံကောင်းတယ်
သူလုပ်နိုင်လို့သူလုပ်တာပဲနော် လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေတောင် အခြေအနေအကြောင်းကြောင့် မလုပ်ရတဲ့သူတွေလဲ ရှိတာပါ သက်သက်မနာလိုတာ
——ဘဲ ။ စပွန်ဆာပေးတိုင်း လူအမြင်ကပ်အောင် မလုပ်သင့်ဘူး ။ နဲတောင်နဲသေးတယ် ။ အင်္ဂရုပ် ဖတ်တတ်တဲ့ လူတိုင်း (ပေတေဦး) ရဲ့ ရုပ်ကိုကြည့်ခိုင်းရင် အဲဒီကောင် ဘာလဲဆိုတာ သိတယ် ။ မင်းတိုံ့တွေအတွက် ကုန်မဲ့ငွေတွေ ကို နာဂစ်၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာ ၊မိဘမဲ့ တွေကို လှုမယ်လို့နဲနဲမှစိတ်မကူးမိဘူးလား ။
စပွန်ဆာပေးတယ်လဲဆိုသေး ကုန်မယ့်ငွေတွေကို အလှုလုပ်ဖို့လဲပြောသေးတယ် ဘကြီးတော်နော်တူဝရီးချင်းနားလည်မှု့မလွဲကြေးနော်
ပီးတော့ … ပြေတီဦးပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းထောင်ထားတဲ့သူ။
သူများကိုကူညီပေးမဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိတာကိုပြောပါတရ် .. ဘာကအဓိကလဲဆိုတာသေချာသိတဲ့သူ …
နာမယ်ကြီးချင်လို.လုပ်တာ / ပိုက်ဆံတွေပိုနေလို.လုပ်တာ … လို.တော့လာမပြောနဲ. …
ပရောဟိတလုပ်ငန်းတွေရဲ. high pressure တွေကိုကျုပ်ကသိတရ် ….
မင်းသမီးတွေ ပေါ် တဲ့ကိစ္စလား …
မပြောပါနဲ.တော့ … အမြဲတမ်းပေါ်နေတာ …
အရင်တုန်းကတော့ ဘာမှမပြောပဲ … အခုကျမှဘာလို. ပိတ်လဲမသိ …
(…..) လို.များလား … ရှုးးး
ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်း က တနှစ် ကို သိန်းတစ်ရာ ဖိုး ဆေးကျောင်း တက်ဖို့ အခက်ခဲ ရှိတဲ့ ဆတန်းအောင် ကျောင်းသားတွေ အတွက်ဆို?
ဂျာနယ်တွေပဲ ပိတ်တာလား အဲဒီခေတ်ပေါ် တွေကော ပိတ်ဖူးလား သိချင်ပါတယ်ရှင်။
အစကောင်းပြီး အဖျားမချူးပါစေနဲ့လို့တော့ ဆုတောင်းတာပဲ
ဒီလိုပဲ ဖောင်ဒေရှင်းတွေက အဖျားချူးတော့ ကိုးလိုကန့်ခံတာတွေ ကိုယ်တိုင်ခံရဖူးလို့ပါ
အဲဒီပုံလေးတွေ ရော တင်ထားပါလား
ပြေတီဦး ကဘာလဲဆိုရင် ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းကဆင်းသက်လာသူပဲ……
အဖေဆရာဝန် အမဆရာဝန် သူကိုယ်တိုင်လည်း အင်ဂျင်နီယာလားမသိဘူး……
မျိုးရိုးသန့်တယ် သဘောကောင်းတယ် အေးတယ် ရုပ်ချောတယ်……….ပိစိကွေးတော့ဒီလိုပဲသိတယ်……….
ဂျာနယ်တွေပဲပိတ်လား ပေါ်တဲ့သူကိုပဲပိတ်ရသလား? ပေါ်တဲ့သူကပေါ်လို့ ဂျာနယ်ထဲပါလာတာပဲ ။ သူတို့မပေါ်ရင် ဘာပါစရာ ကြောင်းရှိလဲ ဟင်းးးး
ကိုယ့်ထက်သာ မနာလို ဖြစ်ကြတာ ရောဂါတစ်ခုလိုများဖြစ်နေကြပြီလားမသိဘူး…
ပေတေဦး ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်စီးပွား ကိုမထိခိုက်ရင် ၀မ်းသာပေးလိုက်ကြပါ…
ကိုယ့်စီးပွား ကို ထိခိုက်အောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေကို အရင် ဥပတိရုပ်ဖတ်လိုက်ပါဦး…..